Midowga Musharaxiinta oo markale ku dhawaaqay banaanbax - Awdinle Online
Midowga Musharaxiinta oo markale ku dhawaaqay banaanbax
Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ay maanta markale ku dhawaaqeen banaanbax kale oo ka dhacayo magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku sheegayaan in la qabto doorasho six or ah ku dhacdo.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo Warbahinta kula hadlay Muqdisho waxaa uu sheegay in dibadbaxyada ay keenayaan nidaam dastuuri, caafimaad iyo in qofka Soomaliga ah uu xur u nqodo in uu cabiri karo dareenkiisa ayna u arkaan mab’da’ wanaagsan oo xiriir la leh hanaanka dowladnimada.
Waxaa uu ku eedeeyay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu Ciidamadii qaranka u adeegsaday in uu ku weeraro musharixiinta, waxaana Ciidamadaas uu ku tilmaamay inaysan cidan aheyn.
“ Waxaa nasiib darro ah on Ciidamadii aan ku naalooneynay inay dhidibada u aasaan qaranimada Maanta nagula weeraro, ciidamada waxaa ay ku dhisan yihiin sharci & dowladnimo hadii ay ka gudbaana ciidan maahan ayuu yiri” Sheekh Shariif.
Previous articleHir-Shabeelle oo ku dhawaaqday in degaannadeeda uu ku faafay Coronavirus
Next articleImaaraadka saldhiga ka sameysanaya Puntland & Deni oo tegay….